Ciidamada Puntland Oo Qabtay Raashin Dhacay – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACiidamada Puntland Oo Qabtay Raashin Dhacay
Ciidamada maamulka Puntland ayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxay ku qabteen gaari la sheegay in lagu soo dhex qariyey 50 kartoon oo Timir dhacday ah.
Gaarigan ayaa la sheegay inuu ka yimid dhanka magaalada Boosaaso, waxaana lagu waday dhanka magaalada B/weyne, hase ahaatee ciidamada ammaanka ayaa gacanta kusoo dhigay.
Fagaare ku yaalla duleedka magaalada Garoowe ayaa lagu gubay timirtan dhacday.
Faarax Galangoolle, taliyaha qeybta Booliiska gobolka Nugaal ayaa warbaahinta u sheegay in gaarigan ay dabogal dheeraad ah ku hayeen.
“Dedaal badan ayaa la bixiyey, waxaan soo qabannay gaarigan oo si qarsoodi ah loogu soo qariyey Timir dhacday, waa la daba joogay gaarigii soo qaaday, dekadda ayaa lagu qabtay, meel baa la dhigay, qolaa fududeysay oo soo gudbisay, ganacsato iyo dad dekadda ka shaqeeya ah, iyagana gacanta ayaa lagu dhigay” ayuu yiri Taliyaha.
Maamulka Puntland ayaa wada dedaallo lagu koontaroollayo tayada badeecooyinka kasoo dega dekadda Boosaaso.
711,923 total views, 9,140 views today
711,923 total views, 9,140 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
711,798 total views, 9,139 views today
711,798 total views, 9,139 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
711,828 total views, 9,139 views today
711,828 total views, 9,139 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
711,892 total views, 9,141 views today
711,892 total views, 9,141 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
711,945 total views, 9,140 views today
711,945 total views, 9,140 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]